समाज Archives - Page 55 of 56 - कृषि पत्रिका
निगालो टुसाबाट आम्दानी बढ्दो
आइतबार १२ भदौ, २०७३
लमजुङ। निगालोको टुसाबाट आम्दानी राम्रो हुने भएपछि जिल्लाको उत्तरी तथा पुर्वी ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । वर्षायामको अन्त्यतिर जङ्गलमा पाइने निगालोको टुसाको माग धेरैभएकाले टिप्न र बिक्री गर्न उनीहरुलाई हतारो भएको हो । गाउँबाट ल्याएको टुसा बिक्री गर्न कुनै कोठा या ठेला भाडामा लिनै नपर्ने डोकामा ल्याउँदै गर्दा बाटोमै सकिने हुँदा सदरमुकाम बेसीशहरसम्म […]
भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता
बिहिबार ०९ भदौ, २०७३
काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने हरेक महिलालाई सुत्केरी स्याहार भत्ता दिन थालेको नयाँ होइन । यहाँ भने जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले भैंसीलाई पनि ‘सुत्केरी भत्ता’ दिने गरेको छ । दुधालु भैसी र पाडापाडी संरक्षणमा चेतना जगाउन यस्तो कार्यक्रम थालिएको हो । दुधालु भैंसी र भर्खरै जन्मिएका पाडापाडी मासुका लागि किनबेच हुन थालेपछि त्यसको […]
कृषि मन्त्री बेपत्ता भएपछी…!
मङ्गलबार ०७ भदौ, २०७३
काठमाडौं। कृषी मन्त्री गौरी शंकर चौधरीको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको छ । आईतबार दुई बजेका लागि दिर्घकालिन कृषी रणनीति बनाउँन राष्ट्रिय किसान सञ्जाल र कृषि मन्त्रालयको संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य लगायत सबै पार्टी निकट किसान संगठनका नेतृत्वहरुलाई कृषि मन्त्रालयमा २ बजे नै आउन भनिएको थियो तर, चार […]
महामारीले बाख्रा मरे, निशुल्क पाउने सुइलाई ६ हजार
शुक्रबार १७ असार, २०७३
दाङ। जिल्लाको पहाडी भेगका दुई गाविसमा फैलिएको महामारीले सात सयभन्दा बढी बाख्रा मरेका छन् । काभ्रे र लोहारपानी गाविसमा जेठ पहिलो साताबाट फैलिएको महामारी नियन्त्रणमा नआएकाले बाख्रा मर्ने क्रम अझै नरोकिएको किसानहरूले बताएका छन् । काभ्रेको गहतेरा, तरा, कब्जा, भेडाबारी, कात्तिके, काभ्रे बचेनी र लोहारपानीको भित्रीखोला, आरुगैरा, तोडकेलगायतका स्थानमा महामारी फैलिएको छ । महामारीले तरा […]
‘कृषिमा क्रान्ति’ गमलामा धान रोपेर
बुधबार १५ असार, २०७३
ललितपुर। आज असार १५ एवं राष्ट्रिय धान दिवसका दिनमा कृषि क्रान्तिको नारा घन्काउने कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले कृषि मन्त्रालयले आयोजना गरेको एउटा औपचारिक कार्यक्रममा गमलामा धान रोपेर ‘कृषि क्रान्ति’ गरेका छन् । खुमलटारमा आयोजित राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम खुमलटारमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको शुभारम्भमा कृषिमन्त्रीले गमलामा धान रोपेका हुन् । मन्त्रालयका एक […]
किन घट्दैछ नेपालमा धानखेत ?
मङ्गलबार १४ असार, २०७३
पोखरा। देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय धान दिवसको चासो र चर्चा बढ्दै गर्दा उब्जाउयोग्य धान खेत प्लटिङ हुँदै जानु गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नै उब्जाउयोग्य धानखेत प्लटिङका माध्यमबाट घडेरीमा परिणत भएपछि खेतको क्षेत्रफल घटेर उत्पादनमा कमी आएको छ । विसं २०६८ यता बढिरहेको प्लटिङका कारण बर्सेनि धानखेतको क्षेत्रफल घटिरहेको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय […]
असारको दोस्रा सातासम्म २० प्रतिशत रोपाइ
सोमबार १३ असार, २०७३
पर्वत। गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष जिल्लामा धान रोपाइ चाडो भएको छ । असारको दोस्रो सातासम्ममा जिल्लाका विभिन्न भेगमा गरी २० प्रतिशत धान रोपाइ भैसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । गत बर्षको तुलनामा यसबर्ष मनसुन चाँडै सक्रिय भएका कारण पनि रोपाइ चाँडो भएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । मनसुन सक्रिय भएसँगै कृषकहरुलाई […]
कृषि व्यवसायमा महिलाको सहभागिता बढ्दो
नेपालगन्ज। बाँकेका थारु समुदायका अधिकांश महिला तरकारीखेती र पशुपालन व्यवसायमा संलग्न भएको पाइन्छ । कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम र बीउबिजन तथा सिँचाइ सुविधा पाएपछि उनीहरु तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । बैजापुर, वनकटवा, कोहलपुर, बिनौना, कचनापुर, फत्तेपुर क्षेत्रका अधिकांश थारु महिला व्यक्तिगत तथा समूहमा तरकारीखेती गर्न थालेका छन् । किरण स्वयम् सहायता समूहका अध्यक्ष […]
तरकारी खेतीले ग्रामीण भेगको जीवनशैली फेरिँदै
भक्तपुर। नगरकोट नगरपालिका– १, ताथली नाला छापकी ३० वर्षीया सिर्जना थापा ११ वर्षअघि ललितपुरको टीका भैरवबाट विवाह गरी आइन् । श्रीमान बेरोजगार तथा पाँच भाइ छोरामा जग्गा बाँडिदा आफ्नो भागमा परेको जग्गाको उब्जनीले थापालाई खान लाउन धौधौ हुनथाल्यो । तर त्यही खेतमा काउली, आलु, वन्दागोभी, लौका र काँक्रालगायत तरकारी बाली लगाउन थालेपछि अहिले थापाको जीवन […]